Teny akaikina sekoly iray no nahitana ity fatin-jazakely ity izay tombanana efa nateraka mihitsy vao nariana. Olona teny an-toerana ihany no nahita ilay tsy manan-tsiny izay marihina fa mbola niboridana tanteraka ary niforitra noho ny hatsiaka hany ka namoy ny ainy. Raha araka ny resaka nifanaovana tamina tompon’andraikitra iray teny an-toerana dia tranga efa mateti-piseho eny Andohatapenaka ny fanariana zazarano tahaka izao. Ny mbola olana anefa dia mikodana loatra iny toerana iny ka tsy fantatra intsony na vahiny no mahavita manao izany na olona eny amin’ny manodidina ihany. Ny BMH moa no tonga naka ny razana teny an-toerana tamin’io fotoana io raha efa misokatra kosa ny fanadihadiana sy ny fitadiavana izay Renin’ilay zaza.